PRINCE2 Foundation iyo Tababar Tababar Tababar iyo Shahaadada
PRINCE2 Foundation iyo Practitioner
PRINCE2 Foundation & Tababar Tababar Tababar iyo Shahaadada
Koorsada Tababarka Prince2 Foundation & Practitioner
PRINCE2® (Mashruucyada Meelaha la Xakameynayo), waa habka maareynta mashruuca oo ballaaran oo loo adeegsanayo oo kuu socdaalaya dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah mashruuc guul leh. PRINCE2® waa hab dabacsan oo loogu talagalay dhammaan noocyada mashaariicda. PRINCE2® Kalkaalisada aasaasiga ah iyo Dhaqtarka waxaa lagu ogaan doonaa xirfadlayaasha iyada oo leh heerkan xaqiiqda ah oo la soo saaray oo loo isticmaalo dawlada Boqortooyada Midowday waxayna adeegsatey qaybta ganacsiga caalamiga ah. Waxay ku dhisan tahay habka ugu wanaagsan ee loo xaqiijiyay maareynta maareynta mashruuca. Koorsadani waxay kuu diyaarineysaa labadaba PRINCE2® Foundation iyo PRINCE2® Dhakhtarka iyo faa'iidooyinka helitaanka shahaadadani waxay aad u sarraysaa qiimaha shahaadada prince2.
Ujeedooyinka tababarka PRINCE2 iyo Tababar Tabobar
Dhageystayaal loogu talagalayKoorsada PRINCE2 Foundation iyo Practitioner
Shuruudahaee loogu talagalay shahaadada 'PRINCE2 Foundation' iyo 'Practitioner Certification'